Loharanon-dalan'ny Lohateny - Dubai Real Estate avy amin'ny Provident
TypeApartmentTrano feno fivarotana varotraCommercial Full FloorCommercial Half FloorVilla VillaDuplexFihaonana fenoHalf FloorHotel ApartmentFampiasana voamaina tanyLand ResidentialLoft ApartmentOfficePenthouseTrano fonenanaResidential Full FloorAntsinjaranyShopStaff AccommodationTownhouseVillaWarehouse
Lohateny Fanoratana Lohateny
Navoakan'ny filohan'ny Departemantan'ny tany Dubai tamin'ny 85 ny volana 2006 ny fametraham-pialàn'ny 30 an'ny 2006 momba ny Fitsipika momba ny fampandehanana ny trano fonenana ho an'ny trano fonenana (Emiratsin'ny Emmo-Reg). Ny fizakan-dàlana dia navoaka araka ny andininy 6 sy 6 sy 28 ao amin'ny Lalàna No (7) an'ny 2006 mikasika ny fanoratana ara-barotra marina any amin'ny Emiratin'i Dubai (ny Lalàna momba ny Lalànan'i Dubai).
(Andininy (6) fehintseran'ny 6 avy amin'ny Lalàna momba ny Zo an'ny Dubai dia nanao ny Departemantan'ny Tany hametraka ny fitsipika mifandraika amin'ny fanaraha-maso sy fisoratana anarana ho an'ny mpampindram-bola tena izy, ny Andininy 28 ao amin'ny Lalàna momba ny Zo ara-barotra tao Dubai dia nanome ny filohan'ny Departemantan'ny tany ny fahefana hamoaka ny fepetra takiana, didy sy torolàlana momba ny fampiharana ny fepetra voalazan'ny Lalàna momba ny Zo any Dubai.)
Ny endri-javatra manan-danja ao amin'ny Lalàna dia azo fintina toy izao manaraka izao: -
Ny Lalàna Brokers dia azo ampiharina amin'ny mpikaroka rehetra mifandraika amin'ny varotra sy ny fividianana ny fananana voasoratra ao amin'ny tany Dubai
Departemanta (mpandaminana mifehy).
Ankoatra ny fepetra takiana mba hahazoana sy hitazonana lisansa momba ny varotra
ny Departemantan'ny Fampandrosoana ara-toekarena ao Dubai, mpikirakira an-tsoratra dia takiana amin'ny fangatahana ny fisoratana anarana ao amin'ny rejisitry ny brokers voatahiry ao amin'ny Departemantan'ny tany Dubai.
Ny fepetra takiana amin'ny fisoratana anarana ao amin'ny rejisitry ny Brokers dia mihatra amin'ny
ny orinasa sy ny olona ao amin'ny orinasa izay maniry hanana fahefana hanatrika ny Sampan-draharahan'ny Landa mba hampandehanana raharaham-barotra. Ny fe-potoam-piofanana amin'izao fotoana izao dia ny AED 5,000 isan-taona ho an'ireo orinasa sy AED 500 isan-taona ho an'ny isam-batan'olona. Ireo saram-pianarana ireo dia eo ambany fanaraha-maso ary mety hiova.
Ny mpikarama mahaleotena dia manana fe-potoana enina (6) volana amin'ny 30 ny volana 2006 ka hatramin'ny
mahazo ny fisoratana anarana ao amin'ny rejisitry ny brokers.
Ny fepetra sasany dia tsy maintsy raisina ho fepetra fanoratana Broker iray ao amin'ny
Manorata, anisan'izany ny famokarana mari-pampianarana iray avy amin'ny mpikarakara fianarana ho an'ny fianarana ary ny fizarana mari-pahaizana matihanina natolotry ny Departemantan'ny Tany.
Ny mpikaroka rehetra voasoratra anarana dia takiana hanaraka ny fitsipi-pitondratena
navoakan'ny Departemantan'ny Tany.
Ny Broker dia tsy maintsy tendren'ny mpanjifany an-tsoratra ary ny fifanarahana dia tsy maintsy
ho voasoratra ao amin'ny Sampan-draharaham-paritra ho toy ny fepetra takian'ny mpikarakara fa tokony handoa ny saramany. Io fepetra io dia natao hanakanana ireo Mpitondra maromaro milaza fa misy komisiona tsy misy trosa.
Ny fandikana ny Lalànan'ny Mpitondra na ny Code of Ethics dia mety hitondra fampitandremana,
fanamarihana, fampiatoana amin'ny asa mandritra ny fe-potoana hatramin'ny enim-bolana (6), lisitra maintimainty na fanesorana ny fisoratana anarana Broker.
Misy Filankevitra vaovao napetraka ao amin'ny Departemanta momba ny tany mba handrenesam-pahaizana
mifandraika amin'ny brokerage. Ity dia tsy mifanaraka amin'ny vahaolana momba ny fifandirana ary ny roa tonta dia tsy maintsy manaiky ny fifanolanana hiantsoana ny Filankevitra. Ny Filan-kevitra dia hiasa ho mpanambatra, fa tsy mpanolotsaina, ary tsy misy antoko tsy manaiky ny fikarohana sy ny tolo-kevitra. Na izany aza, raha ny vokataonan'ny Filankevim-paritra dia mifamatotra amin'ny fametrahana ny fifanarahana amin'ny fifandirana, dia azo ampiharina amin'ny alalan'ny didim-panjakana izany.
Avy eo dia nandika ny fandikana tsy ofisialy ny Lalàna Brokers, miaraka amin'ny Code of Ethics izay navoaka amin'izany:
By-Law No. (85) an'ny 2006
Mikasika ny fanaraha-maso ny fampindramam-bola ho an'ny trano fonenana dia manorata ao amin'ny Emiratin'i Dubai Filohan'ny Departemantan'ny tany sy ny fananana
Taorian'ny fampiharana ny Lalàna No. (7) an'ny 2006 momba ny fanoratana ara-panjakana momba ny fananana ao Emirà ao Dubai, ary manaraka ny andininy (6) fehintsoratra (6), sy (28) io lalàna io ary araka ny soso-kevitry ny Departemantan'ny Tale Jeneraly, Navoakay ireto manaraka ireto:
Trano famokarana any Dubai
Faritra amidy any Dubai
Birao amidy any Dubai
3 Bedroom Villas amidy
4 Bedroom Villas amidy
5 Bedroom Villas amidy
6 Bedroom Villas amidy
Trano famokarana tany Dubai Marina
Faritra amidy any Dubai Creek
Trano famokarana ao Dubai
Trano famokarana tany Dubai Hills Estate
Faritra amidy any amin'ny rantsana arabo 3
Faritra amidy amin'ny Bay Bay
Fitaovana amidy ao Al Barsha
Faritra amidy any Dubai Marina
Offplan Apartments any Dubai
Offplan Villas any Dubai
Trano fanatanjahan-tena any Dubai
Tetikasa momba ny serivisy any Dubai Hills